Guddiga doorashada Puntland oo shaaciyay shuruudaha madaxweynaha - Halbeeg News
Guddiga doorashada Puntland oo shaaciyay shuruudaha madaxweynaha
GAROOWE (HALBEEG)- Guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta shaaciyay shuruudaha laga doonayo siyaasiyiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa sidoo kalena guddiga ayaa ku dhawaaqay jadwal howleedka doorashada oo todobaadkan dhaceysa.
Warsaxaafadeedka ay soo saareen guddiga ayaa lagu xusay qodobbo dhowr ah oo ay ka mid aahaayeen in musharraxu yahay muwaadin u dhashay Puntland, muslim ah da’ ahaan aan ka yareyn 40 sano iyo waliba in uusan lahayn oori shisheeye guursanna Karin inta uu xilka hayo.
Guddiga waxay tilmaameen in iyada oo la tixraacayo jadwal howleedka doorashada in toddobada bishan loo asteeyay in ay tahay maalinta ay musharraxiinta ay khudbadahooda ka hor jeedin doonaan golaha wakiillada soona bandhigi doonaan waxqabadkooda, himilladooda iyo khibraddahooda.
Guddiga waxa ay caddeeyeen in sidddeeda bishan ay dhici doonto doorashada madaxweynaha hoggaamin doona Puntland shanta sano ee soo socota kaasoo ay soo dooran doonaan golaha wakiillada.
Howlaha doorashooyinka Puntland ayaa si xowli ah uga socda guud ahaan Puntland gaar ahaan xarunta maamulkaas ee Garowe waxaana maalintii shalay ahayd la doortay afhayeenka baarlamanka maamulkaasi iyo ku xigeennadiisa iyada oo ay xigi doonto doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Deegaannada maamulka Puntland waxaa ku sugan in kabadan 20 musharrax u taagan kursiga ugu sarreeya maamulkaas.
In ka badan 280 macalin oo tababar loogu soo gaba gabeeyay Muqdisho
Maxkamadda Ciidamada ee Baydhabo oo dil toogasha ah ku ridday eedeysaneyaal